Cadaawe cad - Magaca gemological midig waa topaz midab lahayn - Fiidiyow
Adeegga tijaabada dhagaxa internetka
Waa maxay qaaliga qaaliga ah iyo midda madow ee qaaliga ah?
Sidee loo qiyaasaa qiimaha dhagax?
Iska ilaali 'crystals'?
Maxay yihiin dhacdooyinka muraayadda dhoobka ah?
Sidee loo tuuri karaa adoo iibinaya dhagax?
Waa maxay tijaabada muraayadaha samaynta?
Maxay yihiin muraayadaha dhalmada?
Waa maxay macnaha dahabka platinum ka samaysan Kamboodiya?
Waa maxay giraan ku salaysan?
Waa maxay Siem Reap?
Tags midab la'aan, Topaz, cad
La wadaag Post:
Iibso dukaanka topaz cad oo dabiici ah
Topazka cad waa midabka aan laheyn ee Topaz. Waxaa si khalad ah loogu magacaabaa "cad" ee suuqa dhagaxa. Si kastaba ha noqotee, magaca muraayadda saxda ah waa topaz aan midab lahayn
Macdanta soodhiga ah ee aluminium iyo floriin
Topaz waa macdan macaan oo aluminium ah iyo foloraydh. Qalabka kiimikada Al2SiO4 (F, OH) 2. Topaz waxay dhalaalaysaa habka korontada. Iyo kristantigeeda waa inta badan prizmatic. Joojiya jimicsiga iyo wajiyada kale. Waa maaddo adag, Mohs adag tahay 8. Waa tan ugu adag ee macdanta dabiiciga ah. Taabashadani waxay la socotaa hufnaanta caadiga ah iyo noocyada kala duwan ee midabada leh waxay ka dhigan tahay in uu isticmaalo ballaaran isticmaalka dahabka. Sidoo kale sidii dhagax gooyay. Iyo sidoo kale for intaglios. Iyo dhagaxyo kale oo dhagaxyo ah.
Ciriiri dabiiciga ah, oo aan kuleyl lahayn, aan la daaweyn, laga soo qaatay Takeo, Cambodia
Topaz in ay dabiiciga ah waa Cololess. Dabeecadda macnaheedu waa mararka qaarkood waxa lagu wareersan yahay quartz. Noocyo kala duwan iyo daaweyn ayaa laga yaabaa inay ka dhigaan casaan cas, sidoo kale ciriiri ciriiri, casaan-casaan, cagaaran cagaaran, ama casaan. Iyo mooshinka loo yaqaan "transparent or transparent". Casaan iyo noocyo casaan ah ayaa ka yimaada chromium badalida aluminium ee qaabkeeda crystalline.
Inkasta oo aad u adag tahay, waa in lagu daaweeyaa daryeel ka badan tan kale macdano kale oo isku mid ah oo adag. Sababtoo ah daciifnimo ee isku xirka atomiga ee molecules dhagxaanta dhagxaan ama mid kale. Halka, tusaale ahaan, ka kooban kiimikada dheeman waa kaarbaad. Midba midka kale wuxuu isku xidhaa awood isku mid ah marka loo eego dhamaan darafyadeeda. Tani waxay u egtahay inuu u jilicsan yahay inuu jabo. Diyaarad noocan oo kale ah haddii ay ku dhufato xoog ku filan.
Topaz waxay leedahay jaantus hooseeya oo jaban oo dhagax ah. Iyo dhagaxyo leh wejiyo waaweyn ama jumlado waaweyn maaha kuwo jajab ah sida dhagaxyada laga jarayo macdanta oo leh calaamado jaban. Inkasta oo tayada "topaz sparkles" aan muuqan oo muujineysa "nolol" ka badan marka loo eego quartz. Marka la siiyo cutub "sharaf" oo caadi ah, Waxaa laga yaabaa inuu muujiyo muraayad miis leh. Dhexdhexaadiyay wejiyo ciriiri ah. Ama giraan ka mid ah wejiyada caleemaha. Iyada oo miiskana si fiican u eg.
Topaz badanaa waxay la xiriirtaa dhagaxyada silikiciga ah ee dabiiciga ah. Geela iyo nooca qulqulka. Waxay sida caadiga ah u dhalaalaysaa pegmatites granitic. Ama sidoo kale godadka dhuxusha lafdhabarta. Waxaan sidoo kale ku ogaan karnaa fluorit iyo cassiterite meelo kala duwan.
Gemstones la xiriira
Bisadaha isha topaz
Tags isha Cat ee, Topaz
Tags Bicolor, Topaz
Tags Rutilated, Topaz
Tags London buluug, Sky Bleu, buluug Swiss, Topaz
Soo dir xawli bilaash ah amar kasta oo ugu yaraan $ 50.00 dukaankeenna
Home | Dhalashooyinka dhalashada | Nala soo xiriir